Abukar Arman: kacdoonka Itoobiya waa mid xasilooni darro ka abuuri kara gobolka oo dhan – Radio Daljir
Maarso 11, 2018 11:19 g 0
Itoobiya waxaa ka aloosan xiisado daran oo jinsi iyo kuwo siyaasadeed, saameyn xoog lehna ku yeelan kara xasiloonida Geeska Afrika, iyo inta ka baxsan
Geeska Afrika waa mid buux-dhaafay dhan kasta, waana barta ugu daran siyaasadaha is hardinaya ee adduunka. Tartamada adduunka kuwooda ugu daran ee dhanka dhaqaalaha iyo hagista hoggaanka dunida waa kuwo maanta ka taagan bartaan Geeska Afrika ee kulmisa Galbeed iyo Bari.
Shiinaha iyo Turkiga oo ayagu ah quwado dhanka garab-istaagga iyo waxqabadka dowladaha ay daneeyaan u nugul waxa ay maalgashi la taaban karo ku yeesheen waddamo kala duwan oo Itoobiya ay ku jirto. Saas oo ay tahay, hadana cadaadiska siyaasadeed ee Itoobiya ka jira waxa uu abuuray kacdoon ka dhan ah xukunka qowmiyadda laga tirada badanyahay ee Tigreega oo moroorsatey mudnaan ka sarreysa qowmiyadaha kale, boobteyna hab dowliga dalka, taasina waxa ay abuurtay kacdoon lamid ah kii Gu’gii Carabta. Xukuumadda Tigreegu uma ay bogin kacdoonka iyo muddaharaadyadada joogtada ah, waana ay baqdin galiyeen. Hadda waxa la sugaana waa goorta ay liici doonto dowladdaan haddeerba sii dhiig-baxeysa.
Haddaba su’aasha taagan baa waxa ay tahay, yaa ku faa’iidi doona ama ku khasaari doona ba’an dhow ee ku soo fooleh isu-dheelitirkii awoodda gobolka?
Badgariirka Wabiga Niil
Itoobiya – oo awal aheyd quwad degganaansho ku naaloota, ah hoggaankii gobolka, leh suuq dhaqaale oo soo koraya, ehel iyo wehelna u ah argagixiso ladirirka – waxa ay maanta ka laalaadaa qar halis ah, haddii ay ka badbaadana waa mid sababi doona kacdoon shacab ama dagaal sokeeye.
Dowladda Itoobiya waa mid ay maanta soo foodsaartay laba kala daran oo midi yahay dalka gudihiisa, kan kalena dalka dibadiisa: kacdoonka oramada/Amxaarada oo reer Galbeedku si hoose u taageersanyihiin, iyo dagaalka xuquuqda biyaha oo abbaarsan Masar, Suudaan iyo Soomaaliya.
Itoobiya waxa ay sheegatay cadkii libaax ee biyaha Wabiga Niilka iyo wabiyada kale ee ka yimaada buuraha sare ee Itoobiya kuna shubma biyaxireenka weyn ee hadda la dhisayo, loona bixiyey Grand Renaissance Dam – taasina waxa ay waddamada wabiga ku dhalisay khatar horleh oo aan horey u jirin.
Dhanka Soomaaliya, waa sannadkii saddexaad saddex sano oo isxiga oo Wabiga Shabeelle qallalayo, maaliyiin Soomaali ahna gaajo iyo macaluul foodda u saarey.
Saas oo ay tahay dowladda Itoobiya hadda ka jirtaa diyaar uma aha isbaddal siyaasadeed. Haddaba haddii kacdoonku uu sii socdo, dowladdaan laga tirada badanyahay ee Tigreeguna ay dhayalsato isbaddalka la raadinayo, bandoowna ay soo rogto sannadkii labaad, taasi waxa ay soo dadejinaysaa xasilooni darro, deganaansho la’aan iyo waliba maalgashigii ajnabi oo asna sidoo kale ay dabeyshu qaaddo oo la waayo.
Kaba sii daran e Itoobiya waxa ayba waayi kartaa garabkii, soodhaweyntii iyo shaabbaddii mudnaanta ee Mareykan ee ‘dowladda dowladaha loogu jecelyahay.’
Inkasta oo Rex Tillerson, waa Wasiirka Arrimaha Dibadda ee USA, uu asbuucaan Itoobiya booqdey, haddana Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanku si tartiib-tartiib ah bay uga siijeesaneysaa Itoobiya, sababta ugu weyna ay tahay axdifurka iyo khayaanada ay Itoobiya la beegsatey howlihii Koonfurta Suudaan.
Dhanka xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha, in kasta oo ay labadoodu af macaan iskula hadlaan, islana oggolyihiin in la joojiyo dagaalka sokeeye ee ka aloosan Koonfurta Suudaan, haddana tartanka ay labadaan quwadood ugu jiraan arrimaha gobolka waa mid cadaadis dahsoon ku haya Itoobiya iyo in ay siyaasadda hal quwad oo kaliya daacad u noqoto.
Saas oo ay tahay, maadaama Shiinuhu uu maalgashi ballaaran ku leeyahay Itoobiya, Suudaan iyo ceelasha saliidda ee Koonfurta Suudaan, go’aan qaadasho dhib kuma aha.
Dhowr sano kahor waxa aan qoray maqaal dulucdiisu aheyd in labada dowladood ee ugu xasilloon Geeska Afrika (Kenya iyo Itoobiya) ay noqon doonaan kuwo ka liita Soomaaliya, meesha Soomaaliya soo roonaaneyso.
Dowladda Itoobiya waxaa maanta horyaal khatar tii ugu darneyd tan iyo intii ay xukunka qori caaraddi ku maroorsatay; dhanka kale, Kenya waa dal kala dhantaalmey oo laba madaxweyne ku kala ‘doortey’ si qaballi ah.
Kenya – oo ah xudduntii beesha caalamka ee warshadda gargaarka bani’aadanimo – waa mid qar ka laalaada, in ay qaraxdana u jirta hal dhacdo oo weyn kaliya.
Itoobiya intay ku milantey siyaasaddii Soomaaliya baa haddana sirdoonkii Itoobiya waxa ay si joogto ah u wadaan hawlgallo iyo barobogaando aan dhammaan oo shacabka Soomaaliyeed lagu marinhabaabinayo, danta laga leeyahayna ay tahay in Soomaaliya marnaba aysan helin siyaasad mideysan ama mucaarad mideysan, iyo in ay si joogto ah u soo xeraysato siyaasiyiin Soomaali ah oo amarka Itoobiya oo kaliya fuliya, danta dalkoodana aan marnaba miiska soo saari karin.
Saraakiisha wardoonka ee Itoobiya iyo xubno kamid ah dibloomaasiyiinteeda ka hawlgala dalka Soomaaliya oo ay waliba weheliyaan saraakiil Soomaalida-Itoobiya waxa ay si si joogto ah u marinhabaabiyaan deedna duufsadaan saraakiisha dowladda Soomaaliya ee aan waxba kala ogeyn, xataa aqoonyahanka Soomaaliyed iyo waliba kuwa u dooda xuquuqda bulshada ayaga oo isticmaalaya siyaasad sare iyo barobogaando xirfadeysan.
Halkaas oo xaal marayo, haddana IGAD – Itoobiyadii dahsooneyd ee gobolka – waxa ay hadda shaaca ka qaaday oo dalbaneysaa in xuduudaha gobolka la isku furo, dowladaha gobolkuna arrinkaas ay heshiis ka yeeshaan. Cidna kama dahsoona in dalabkaas oo kale uusan aheyn mid u cuntami kara dowladaha liita sida Soomaaliya, maxaa yeelay waxba kama duwana Soomaaliya oo Itoobiya yeelato. Saas oo xaal yahay baad hadana waxa aad arkeysaa oo maqleysaa siyaasiyiin Soomaaliyeed oo maalin cad u dhaaminaya dalabkaas Itoobiya.
Hawlgaladaan wada quuska ah iyo waliba iscasilaadii Raysal Wasaare Hailemariam Desalegn waxa ay dhammaantood muujinayaan in dowladda waqtigeedu uu hadda gabaabsi yahay.
Suudaan saddex daran kala dooro (Itoobiya, Masar iyo Turki) baa ku habsatay. Waa mar e Suudaan kama maaranto Masar maxaa yeelay labadooduba waxa ay ka cabbaan biyaha sii yaraanaya ee Wabiga Niil oo sharci ahaan uu Anglo-Egyptian Treaty labadaas dal u xukumay.
Waa mar kale e, Suudaan kagama maaranto Itoobiya dhanka iskaashiga dhaqaale ee Shiinaha iyo in ay Madaxweyne Cumar al Bashir daaha IGAD kaga rogto isha aan hareyn ee reer Galbeedka.
Turkigu asna waxa uu lagamamaarmaan u yahay dhanka hormarinta iyo iskaashiga waqtiga-dheer ee istaraatajiyadda huwan. Ogoow oo Suudaan waa waddankii labaad ee Afrika oo Turkiga u xaarxaarey saldhig milateri, meesha Soomaaliya ka tahay dalkii koowaad.
Intii qolada mabda’a “neocon” ay siyaasadda dibadda ee Mareykanka maamulayeen, ladagaalanka argagixisaduna uu ahaa hadal-haynta maalinkaas, Eriteeriya waxa ay ku rogeen cunoqabateyn. Waxaana lagu eedeeyey in ay tahay maalgaliyaha iyo hubeeyaha kooxda al-Shabaab.
Maanta ma jiro qof siyaasadda Itoobiya ka madaxbannaan oo taas rumeysan, xataa UN Monitoring Group-ka Soomaaliya iyo Eriteeriya fikirkaas ma qabaan, saas oo ay tahayna Eriteeriya weli cunaqabateyntii lagama qaadin.
Inta u doodda siyaasadda Itoobiya iyo kooxo kale oo saameyn ku leh siyaasadda dibadda ee Mareykanka weli waa ay ku dhiiranyihiin in ay Eriteeriya ku shaabadeeyaan dowlad weli ku dheggan mowqifkii Markis (Marxism), dagaal ku haysa hay’adaha caalamka sida IGAD iyo Golaha Ammaanka QM; ahna dal xiran oo ababiya naceybka reer Galbeedka.
Jirtaayo hadana dowladda Imaaraadka Carabtu waxa ay tan iyo sannadkii 2015 maalgashi ballaaran ku waddey Eriteeriya, waana markii ay biloowday dagaalkii Yeman oo ay ka dhasheen masiibooyinka bini’aadanimo kuwooda ugu xun. Ciidanka Imaaraadka iyo calooshooda-u-shaqeystayaasha Blackwater hadda waxa ay ka duulaan saldhigooda milateri ee Casab. Haddii saldhiggaas uu yahay ammuur dahsoon (Trojan Horse) amaba uusan aheynba ayana waa xaajo kale.
kacdoonkaan ka-dhanka ah dowladda Itoobiya waa mid sii soconaya. Laakiin, anaga oo og in xukuumadda Tigreegu ay toos u maamusho dhammaan laamaha iyo cudadda dowladda, kalaguur awoodeed iyo maanta ma aha ammuur sahlan.
Intaas waxaa dheer oo la isla dhexmarayaa in Itoobiya ay abuurtey oo carbisey ciidan wada Soomali ah oo loogu talagaley ladagaalanka mucaaradka (Liyu Police). Ciidankaas oo aan dub naxa laheyn waxaa loo adeegsaday Oramada, saas oo kalena waxaa loo adeegsaday ladagaalanka Soomaalida ku teedsan xudduudda labada dal.
Dilalka sharci-darrada ah iyo xadgudubka xuquuqda bani’aadamka ee dowladda Itoobiya kula kacdo dadkeeda waa kuwo la wada diiwaangaliyey. Saas oo ay taheyna, waa hubanti in qowmiyadaha Oramada iyo Amxaaradu ay yoolkooda gaari doonaan, inkasta oo aysan ka marnaan doonin lafajabin iyo dhiig daata.
Laakiin su’aasha la isweydiinayaa waxa ay tahay isbaheysiga labadaas qowmiyadood ma is-haysan karaa, mise aaminddarada soojireenka ah ee dhextaal waxa ay sababi doontaa in mid walbaa uu gooni u go’o sida uu oggolyahay dastuurku?
Suu rababa xaal ha noqdee, haddii dagaalkii sokeeye ama qalalaase ka dillaaco Itoobiya waa suurtagal in ay khatar galiso Geeska Afrika oo dhan, abuurtana xaalad binin’aadanimo oo ba’an, siiba Soomaaliya.
Dhankaas iyo Koonfurta Suudaan iayagu waa rajobeel in heshiis waara laga gaaro, taasna waxaa sababaya faragalinta shisheeye oo dabkii sii holciyey, in ay faraha kala baxaana ma aha ammuur sahlan ama salkeedu hadda dhowyahay. Xaalka Jabuuti asna ma aha mid sahlan oo waxa ayba dowladda Jabuuti martigalisey siyaasad ciyaareed tii adduunka maanta ugu xiiso badneyd. Yaabba yaabkiis e, markaas waxaa kuu soo harey Eriteeriya oo noqota jasiiraddii nabadda iyo xasiloonida gobolka.
Iskusoo-wada-duuboow, timaada dhow, waa suurtagal in Turki uu maalgashigiisa Itoobiya u wareejiyo dhankaas iyo Suudaan, Soomaaliya iyo Eriteeriya. Shiinuhu asna xeelad kale buu la imaan karaa oo maalgashigiisa waxa uu ku soo dari karaa Eriteeriya. Waxaa kuu soo haray Maraykanka – oo bilaa siyaasad cusub ah – asna waxa uu sii wadayaa duqeynta diyaaraha aan duuliyaha laheyn illaa uu ku gaaro waalli siyaasadeed iyo hawtalhamag meel xaal siyaasadeed marayo.
Fiiro Gaar ah: Tartumaaddu waa tii bahda Daljir, fikirkuna waa kii Abukar Arman
Abukar Arman waa qoraa, diblomaasi hore, waana bulsho-u-adeege falaanqooyinkiisa siyaasadda adduunka iyo diinta aad loo daabaco, loona daalacdo. Qoraaladiisa ka dheeho bartaan daljir.com iyo Foreign Policy Association http://foreignpolicyblogs.com/author/abukararman/
Abukar Arman is a writer, a former diplomat and an activist whose work on foreign policy, geopolitics and faith is widely published. His postings are on daljir.com and he also blogs at Foreign Policy Association http://foreignpolicyblogs.com/author/abukararman/
Qoraalka oo ku qoran afka Ingiriiska hoos arag:
Qoraalo iyo wareysiyo kale oo la xiriira mowduuca danaha Itoobiya ee dalka Soomaaliya iyo kala-qoqobka Soomaalida
Siyaasadda & Dhaqaalaha 470 Wararka 18826